छाया सरकारले के गर्छ ? विश्वमा कस्तो छ चलन ? – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / छाया सरकारले के गर्छ ? विश्वमा कस्तो छ चलन ?
छाया सरकारले के गर्छ ? विश्वमा कस्तो छ चलन ?
काठमाडौं,६ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो छलफल र तयारीपछि छाया सरकारको घोषणा गरेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा छाया सरकार बनाउने विषय नराम्रो होइन । किनकि यसले सत्तापक्षले गरेका वा गर्न लागेका कुनै गल्तीलाई हुनै नदिन वा तत्कालै सच्याउन मद्दत गर्दछ । अर्थात् गल्ती गर्न दिँदैन । यही मान्यताका कारण नै विश्वका विभिन्न मुलुकमा छाया सरकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
कांग्रेसले बनायो छाया सरकार,कसलाई कुन मन्त्रालय ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयोजकको जिम्मेवारी पाएकी डा. डिला संग्रौला पन्तले भनिन सरकारको कामलाई उत्तरदायी बनाउन आफूहरुको भूमिका रहने छ ।
पहिलो छाया सरकारकै गृहमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली
नराम्रो होइन ‘छाया सरकार’, विश्वमा कस्तो छ चलन ?
Previous: धर्नामा महिलाका लागि लैंगिक समानता तालिम
Next: बैँककाे बार्षिक उत्सवमा अम्विकेश्वरी मन्दिर परिसर सरसफाई